Tantara: Lehilahy Notarihin’ny Kintana Iray - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
Rehefa fantatr’i Heroda fa lasa nody ireo lehilahy avy any Atsinanana, dia tezitra indrindra izy. Koa nanome baiko izy mba hamonoana ny zazalahy rehetra roa taona no ho midina tao Betlehema. Nefa i Jehovah dia nampitandrina mialoha an’i Josefa tao amin’ny nofy iray, ary lasa nankany Ejipta niaraka tamin’ny ﬁanakaviany i Josefa. Tatỳ aoriana, rehefa fantatr’i Josefa fa maty i Heroda, dia nentiny niverina tany Nazareta i Maria sy Jesosy. Tao no nahabe an’i Jesosy.